तेस्रो पटक विवाह गर्दैछन् आमिर खान ? नजिकका साथीले बताए वास्तविकता | Ratopati
बलिउड सुपरस्टार आमिर खान आजकाल आफ्नो तेस्रो विवाहको विषयमा चर्चामा आएका छन् । केही दिन अघि सार्वजनिक भएको खबर अनुसार आमिर एक बलिउड नायिकासँग तेस्रो पटक विवाह गर्ने तयारीमा छन् । फिल्म ‘लाल सिंह चड्डा’ सार्वजनिक भएपछि आमिर आफ्नो विवाहको घोषणा गर्नेछन् । अब यो विषयमा नयाँ जानकारी प्राप्त भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएको छ ।
आमिरले तेस्रो विवाह गर्ने सम्भावना कति ?
आमिरसँगको सम्बन्धबारे बोलिन् फातिमाः
सन् २००५ मा भएको थियो किरण–आमिरको विवाहः
आमिर खानको दोस्रो विवाहबारे कुरा गर्ने हो भने उनको भेट किरण रावसँग सन् २००१ मा भएको थियो । यी दुईले फिल्म लगानमा सँगै काम गरेका थिए । फिल्ममा आमिर खान हिरो थिए र किरण राव सह–निर्देशक थिइन् । आमिरको सम्बन्धविच्छेद श्रीमती रिना दत्तासँग सन् २००२ मा भएको थियो । त्यसपछि किरण र आमिरबीच प्रेम सम्बन्ध स्थापित भयो । सन् २०११ मा छोरा आजाद राव खानलाई सरोगेसीमार्फत् जन्म दिए । आमिर र किरणको सम्बन्धविच्छेद त भएको छ तर उनीहरुले आफूहरु सधैं एक परिवारको रुपमा रहने बताएका छन् ।